မိန်းမဂိုလ် ယားယံခြင်း(ယောနိယားယံခြင်း)ဘာလုပ်ရမည်နည်း? - intouchmedicare
Last updated: 25 Mar 2022 | 2895 ကြည့်ရှုခြင်း |
မိန်းကလေးများအား စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးသောလက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်လာသော မိန်းမဂိုလ်ယားယံခြင်း (ယောနိယားယံခြင်း) ခြင်းဖြစ်ပါသည်။။တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးပြင်းထန်မှု့လက္ခဏာကွဲပြားမှု့ရှိပါသည်။အချို့မှာ ဖြစ်လိုက် ပျောက်လိုက်နှင့်အချို့မှာပြင်းထန်မှု့နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူဆင်းမှု့များ (သို့) အနံ့ရှိခြင်းများကြောင့် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်နှင့်သင့်တော်သောကုသမှု့အားရယူရန်အတွက် မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးသင့်သည့်အထိလိုအပ်လာပါသည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေထိုသို့သောယားယံခြင်းလက္ခဏာများအား ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့်သက်သာစေသောမည်သည့်နည်းလမ်းများရှိသည်နှင့်ပက်သက်၍ ဤဆောင်းပါးတွင်အဖြေရှိပါသည်။
အမျိုးသမီးတို့၏ယောနိယားယံခြင်းသည် အများအားဖြင့်2မျိုးရှိပါသည်။၄င်းတို့မှာ-
ယောနိယားယံခြင်းလက္ခဏာ ပထမအမျိုးအစားမှာ ကူးစက်ခြင်းမဟုတ်သော မအင်္ဂါအနီးတစ်ဝိုက်ရှိအရေပြားယားယံခြင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး ဥပမာ အတွင်းခံဘောင်းဘီနှင့်ယောနိကြားပွတ်တိုက်မှု့၊ အဝတ်လျှော်ဖွတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့် (သို့) အဝတ်အထည်အားနူံ့ညံ့စေသော အမွှေးဆီဆေးရည်များကြောင့် တင်းကျပ်လွန်းသောအတွင်းခံဘောင်းဘီများသည် စိုစွတ်မှု့အားဖြစ်စေခြင်း (သို့) မိန်းမဂိုလ်၌မူမမှန်မှု့များအားဖြစ်စေပါသည်။
ဤယားယံမှု့ပုံစံသည် အများအားဖြင့်အခြားသောလက္ခဏာများပါဝင်မှု့ကြောင့်သိသာထင်ရှားပြီး ကူးစက်လာသောရောဂါပိုးအလိုက် ကွဲပြားမှု့ရှိပါသည်။ ဥပမာ အကယ်၍ဘတ်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လျှင်အဖြူဆင်းခြင်း၊အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း၊စပ်ခြင်း၊ယားယံခြင်း၊ပူ၍ကိုက်ခဲခြင်း၊အကယ်၍မှိုဆွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အဖြူဆင်းခြင်းမျိုးသည် ဒိန်ချဥ်ကဲ့သို့အရောင်ရှိပြီးနှင့်ယားယံခြင်းမျိုး စသည်ဖြင့် ဤလက္ခဏာများရှိလာပါက အခြားသို့အရင်ကထက်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု့မရှိမီ ကုသနိုင်ရန်အတွက်မီးယပ်နှင့်ပက်သက်၍စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
မိန်းမဂိုလ်ယားယံခြင်း (ယောနိယားယံ) သောအခါမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း ?
မိန်းမဂိုလ်၌မလိုလားအပ်သော ယားယံခြင်းအား ကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အတွက် လုက်ဆောင်
ရမည့်အချက်များစွာရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့်အောက်ပါတို့ကိုဖြစ်စေသောအပြုအမှုအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
ယောနိအား အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းအရာများ (သို့) သန့်ရှင်းသောရေနှင့်ဆပ်ပြာများသည်
အကယ်၍ ယားယံခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါက ယောနိအားသန့်စင်ရန်အသုံးပြုနေသောထုတ်ကုန် ပစ္စည်း (ဆပ်ပြာမွှေးရည်) အား ရပ်သင့်ပြီးရိုးရိုးရေ (သို့) ဆပ်ပြာကိုသာအသုံးပြု၍ အပြင်ပိုင်း အားဆေးသင့်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိအသုံးပြုသည့် အချို့သောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရည် များတွင်ပါဝင်သော ဓာတုပစ္စည်းများသည် မိန်းမဂိုလ်အတွင်းရှိ Lactobacilli ကဲ့သို့သော ကောင်းသောဘတ်တီးရီးယားများအားပျက်စီးစေနိုင်ပြီး လိင်အင်္ဂါအတွင်း မညီမျှမှု့အားဖြစ်စေနိုင် သောကြောင့် ယားယံခြင်း၊အထိအဖြူဆင်းခြင်း (သို့) အနံံ့ဆိုးများအားဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ကုတ်ချင်သောစိတ်အားမကုတ်မိအောင်ထိန်းချုပ်ရခြင်းသည် ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းရွတ်ဆိုထားရသည်မှာ ကုတ်မိလေလေ ပိုမိုပြန့်ပွားနိုင်လေလေဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင်ရောင်ရမ်းခြင်း (သို့) အမာရွတ်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့် လက္ခဏာပြလာသောအခါ၌အဓိက အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းသည် ဆရာဝန်နှင့်သွားတွေ့သင့်ပါသည်။
လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီးချည်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအတွင်းခံဘောင်းဘီမျိုး ရွေးချယ်၍ ဝတ်ဆင်ခြင်းသည် လွန်ကဲသောတင်းကျပ်မှု့အားမဖြစ်စေခြင်းကြောင့် စိုထိုင်းမှု့နှင့်ပွတ်လျှမှု့ အားလျော့ကျစေသည့်အပြင် နူံ့ညံ့မှု့ရှိသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာသုံး၍လျှော်ဖွတ်သင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်လျှင် ခွဲ၍လျှော်ဖွတ်ခြင်းသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသောကာကွယ်မှု့နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်သာသုံးစဣူ ၊ဆပ်ပြာ (သို့) ရေချိုးဆပ်ပြာဆီခရင် (မ်) နှင့် ရေမွှေးရောစပ်မှု့ပါရှိသောလစဥ်သုံး ပစ္စည်းကပ်ခွာများသည် ယားယံမှု့အားဖြစ်စေသောကြောင့် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
အကယ်၍ယားယံမှု့နှင့် အဖြူဆင်းခြင်းအပါအဝင်(သို့)မိန်းမဂိုလ်မှသွေးထွက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာ လျှင် မိန်းမဂိုလ်အတွင်းပိုင်းအားမီးယပ်စစ်ဆေးရန်အတွက်ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံးသွားတွေ့သင့် ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်ခါတစ်ရံ ရောဂါများ၏အချက်ပြမှု့ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ် ပါသည်။ဥပမာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောဂါများ၏လက္ခဏာတစ်ခု လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ဖြစ်ပေါ်သောအကြောင်းအရင်းအားစစ်ဆေးတွေ့ရှိမြန်ဆန်မှု့သည်ကုသမှု့အား ကူညီထောက်ပံ့မှု့နှင့်ပိုမိုထိရောက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိန်းမဂိုလ်(ယောနိ)ယားယံခြင်းသည် ရှက်စရာကောင်းသောအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်အကယ်၍ ဆရာဝန်နှင့်အမြန်ဆုံးသွားတွေပါက အချိန်မီကုသနိုင်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ရောဂါဆိုးများအားကူးစက်ပြန့်ပွားမှု့မဖြစ်စေပဲ ပြဿနာရှိသောသူများ (သို့) မိန်းမဂိုလ်အတွင်းပိုင်းစစ်ဆေးလိုသူများအတွက် မီးယပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု့များအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှု့များအား သင့်အိမ်နှင့်နီးသောကျွနုပ်တို့ Intouch Medicare ဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းအား သင်နှင့်နီးသောဆေးခန်းဟု Google တွင်ရိုက်၍ရှာခြင်းဖြင့် (သို့) Website ဝက်ဆိုက်ပေါ်မှဆက်သွယ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းဆက်မေးခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။